I-Artificial Intelligence Isiza Kanjani Amabhizinisi | Martech Zone
I-Artificial Intelligence icwebezela kakhulu embonini yesoftware ngamakhono ayo. Izinkampani zisebenzisa ubuhlakani bokufakelwa njengoba ziqhubeka nokukala nokuguquka. Eminyakeni embalwa edlule, sizwile izindaba eziningi zempumelelo maqondana nobuhlakani bokufakelwa. Kusukela ekusebenzeni kahle kwe-Amazon kuya ku-GE ukugcina imishini yayo isebenza, ubuhlakani bokufakelwa bebulokhu buhamba phambili.
Ezweni lanamuhla, hhayi kuphela izinkampani ezinkulu kepha nezimboni zabakhangayo nazo ziyavela ngenani. I-Artificial Intelligence inamathuluzi ahlukahlukene angasiza izimboni ezincane neziphakathi nendawo ukuthuthukisa ukukhiqiza nokusebenza kwazo.
Izindlela ezi-5 Zokuhlakanipha Okungezona Okungasiza Ibhizinisi Lakho
Usizo oluvela kumsizi wokusesha ngezwi - Umsizi wokusesha ngezwi angakusiza noma nini nanoma kuphi. Umsizi wokusesha ngezwi owaziwa kakhulu nguSiri oza kumakhompyutha nakumadivayisi we-IOS. Kukhona nabanye abasizi bokusesha ngezwi njengomsizi weGoogle neBixby, eza maduzane kumadivayisi we-Samsung. Ngokusebenzisa ubuhlakani bokuzenzela, abasizi bokusesha ngezwi bangasiza ekubahlinzekeni ngolwazi abaludingayo. I-AI nayo ingasetshenziswa njengethuluzi lokusiza ukususa umthwalo kumuntu. Izixazululo ezithandwayo yilezi -Google, Microsoft, Amazon, Futhi I-Dialogflow.
Ukunquma ukulingana emakethe - Ku qonda ukwahlukaniswa kwabathengi, ubuhlakani bokufakelwa bungasetshenziswa njengethuluzi lokunquma ukulingana kwemakethe yomkhiqizo. Lokhu kungenziwa ngokuthepha amandla okufunda komshini ukuqonda ukwahlukaniswa komthengi. Noma iyiphi inhlangano yebhizinisi ingasebenzisa ubuhlakani bokufakelwa ukuhlaziya nokuqoqa izibalo zemakethe ngokushesha okukhulu. Ngokusebenzisa ubuhlakani bokuzenzela, izinhlangano zingakhanya ekukhangiseni okuqondiwe kwendabuko kanye naku-inthanethi. I-Artificial Intelligence inikeza noma yikuphi ukuqonda kwebhizinisi ekuqondiseni isisekelo samakhasimende abo. Umhlinzeki oyedwa ogxile ekuhlukanisweni kwamakhasimende esebenzisa i-AI ngu Lexer.
Isizukulwane sokubandakanyeka kokuthuthukiswa kwabasebenzi - Akuwona wonke amabhizinisi azoba namandla okuqasha umuntu wakwa-HR. Amabhizinisi anjalo angasebenzisa ubuhlakani bokufakelwa ukuqapha ukubandakanyeka nezidingo zentuthuko zabasebenzi. I-Artificial Intelligence ibuye iqoqe izimpendulo zokusebenza kwesisebenzi. Ukukhathazeka kwawo wonke umsebenzi nokuncishwayo kwakhe nakho kungabiwa kusetshenziswa amathuluzi obuhlakani bokufakelwa. Kungumsebenzi womsunguli wokuqala kanye nomnikazi webhizinisi, ukufaka ama-vibes amahle emsebenzini ukuze baqinisekise ukuthi amalungu eqembu labo angakuqonda ukuphazamiseka nokukhathazeka. Isibonelo ngu Izixazululo ze-AmplifAI.
Ukwenza ngcono ukusebenzelwa kwamakhasimende - Ukwenza ngcono ukwesekwa kwamakhasimende kanye nezinsizakalo zamakhasimende zenhlangano yebhizinisi, ubuhlakani bokufakelwa bungasiza ekusizeni abasebenzi. I-Artificial Intelligence ingasetshenziswa ukuhlunga amakhasimende amathikithi wokuhamba, uphendule imibuzo yawo ku-inthanethi njll Amathuluzi angasiza namabhizinisi amancane ukuletha izinsiza ngendlela esebenza kahle. Ngokusetshenziswa kwamathuluzi e-AI, kuzoba nokwanda kokwaneliseka kwamakhasimende nokuzibandakanya.
Ukusetshenziswa kwesisombululo esenziwe ngomumo - Amathuluzi we-Artificial Intelligence angenza ngokuzenzakalela futhi aqondise izinkinga eziningi nemisebenzi yansuku zonke ezikhaleni zehhovisi ngokuzinikela okuningi. Amathuluzi we-AI enza imisebenzi ehlukahlukene njengokuphathwa kwezokuxhumana ngokunikeza imibiko yebhizinisi. Amapulatifomu asuselwe ku-Artificial Intelligence avumela amakhasimende ukuthi aphathe izikhala zokuqashisa kwezohwebo. ISalesforce Einstein, IBM Watson Studio, I-Google Cloud AI, Azure Machine Ukufunda Studio, Futhi Ukufunda ngomshini we-AWS amathuluzi ahola imboni.
Onke amathuluzi obuhlakani angenhla enza ukuba amabhizinisi akwazi ukuncintisana. Omunye wemisebenzi eyenziwe kakhulu kusetshenziswa i-AI ukuphathwa kokuxhumana kwansuku zonke, ukuqoqa ama-analytics wedatha, ukuhlela imihlangano nokunye okuningi. Ngosizo lobuhlakani bokufakelwa, amabhizinisi amancane naphakathi nendawo athuthukisa ukusebenza kwawo kanye nokuphendula ezimakethe zesoftware… akwazi ukuncintisana nezinhlangano ezinkulu kakhulu.
Kunezindlela ezahlukahlukene lapho ungathuthukisa khona amazinga akho ebhizinisi ngokusebenzisa ubuhlakani bokufakelwa, kufaka phakathi:
Yenza ukuthengisa kwakho kukhuphuke ngokumaketha: Amathuluzi asuselwa ku-Artificial Intelligence angasiza ibhizinisi lakho ukwenza izimakethe zansuku zonke ngokwezifiso, ulwazi lokuthengisa abathengi, ukuxazulula izinkinga njll. I-AI nayo ingasetshenziswa ekuphakamiseni amakhasimende akho ngezinto ezingeziwe, ngokuhlaziya imikhiqizo abayisebenzisayo noma abayisebenzisile. Ungasesha izindlela lapho amanani akho angenziwa kahle futhi uqonde ukuncintisana kwakho. Izicelo ze-AI zisiza ekubekeni phambili amakhasimende akho futhi zisebenzele ukuphathwa kokuphakelwa okuhle.
Yenza lula ukuphathwa kokuthengwa kwempahla:Izicelo ze-AI zingasiza amabhizinisi ukuphatha ukuphatha kwabo kahle kakhulu. Le yindlela engcono yokwenza ngcono amaketanga wokunikezela nokwenza kabusha ama-refill. Izicelo ze-Artificial Intelligence zizokusiza ukuthi uguqule ukulawulwa kwe-oda lakho futhi ufeze izinqubo zebhizinisi lakho.
Ukwenza ngcono ukuphepha kanye nokugcinwa kohlelo lokusebenza:I-AI ingasiza ibhizinisi lakho ukuthi lithuthukise amashejuli alo wesondlo, ikakhulukazi emkhakheni wezokuthutha nowokwenza. Isibonelo, imboni yezindiza isebenzisa ubuchwepheshe bokufakelwa okwenziwayo yokwenza ukuhlolwa kwesondlo. Ukuwohloka nokudabuka kwezingxenye zomshini embonini yezindiza kungalandelwa kusetshenziswa izinhlelo ze-AI. Lezi zinhlelo zokusebenza zingakusiza ukuthi wakhe amashejuli wesondlo wokusebenzisa kangcono. Lokhu ekugcineni kugwema ukubambezeleka okufunekayo ukulethwa kolwazi kanye nokuhlaziywa.
Ukuvimbela ubugebengu obenziwa nge-inthanethi:Izinhlangano zebhizinisi zichitha isikhathi esiningi zizama ukulandela umkhondo wokukhwabanisa. Njengoba kunamaphethini akhona ekuhlakanipheni okufakelwayo, amathuluzi angasetshenziselwa ukuthola izinsongo zokuphepha kwe-cyber. Ngokusebenzisa amathuluzi we-AI, kungancipha kwinani le-alamu yamanga esiyitholayo njengoba kungeyona imithetho esuselwa kuzicelo.
Usebenzisa ubuchwepheshe obuqhutshwa nguwe:Kunamabhizinisi amaningi adinga ukuhambisa imikhiqizo ngobuningi. Amabhizinisi anjalo ancike ezinhlelweni zobuhlakani bokufakelwa. Izinhlelo ze-AI zingasetshenziselwa ukuthutha ngoba zizobasiza ukwehlisa izindleko futhi zikhombise ukuthi zithembeke kakhulu kunezimoto eziqhutshwa ngabantu. Izindleko zokuhamba nazo zingasindiswa ngokusebenzisa amasistimu obuhlakani bokufakelwa.
Qasha abazobhapathizwa abahamba phambili: Ukuthola abakhethiweyo abaphambili nokuqasha ibhizinisi lakho, yisikhathi esiningi sokuthatha lo msebenzi. Lesi yisizathu esenza ubuhlakani bokufakelwa bukwazi ukubhekana nokuqashelwa. Ngokusebenzisa izinhlelo ze-AI, abaqashi bangenza izingxoxo ngokususelwa kusethi yezimpawu ezingokomzwelo ezazinqunywa phambilini. Ngokwenza kanjalo, kuzosiza ibhizinisi lakho ukwenza lula inqubo yalo yokuqasha.
Ukwenza izinqumo zebhizinisi ezinhle:Noma iyiphi idatha ayinalusizo uma ingahlaziywa kahle. Ngokuthola okukhiphayo okudingayo, udinga ukufunda kusuka kudatha etholakalayo. Ungathembela ngokuphelele kuzicelo zobuhlakani bokuzenzela ukwenza umsebenzi wakho ube lula kakhulu. I-AI ingathola amaphethini futhi la maphethini angasetshenziswa ekuthuthukiseni ubuchwepheshe benethiwekhi nokugcina bebhizinisi lakho.
Ngakho-ke, lezi izindlela zokuthuthukisa izindinganiso zebhizinisi lakho usebenzisa izinhlelo zokusebenza zobuhlakani bokufakelwa namathuluzi. Ngokwenza njalo, ibhizinisi lakho lizokwenzela inzuzo engcono futhi lizuze isikhundla esihle emakethe.